Halyeeyga reer Brazil ee Ronaldo oo fariin xamaasad leh u diray Neymar Jr – Gool FM
(Brazil) 15 Okt 2020. Halyeeyga kubadda cagta reer Brazil ee Luís Nazário de Lima Ronaldo ayaa fariin xamaasad leh u diray xiddiga ay isku wadanka ka soo wada jeedaan ee Neymar Jr,
Xiddiga kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar ayaa ku guuleystay inuu kaga sara maro halyeeyga Luís Nazário de Lima Ronaldo liiska gooldhaliyaasha ugu sareeya taariikhda xulka qaranka Brazil.
Xiddigga xulka qaranka Brazil iyo kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar Jr ayaa ku guuleystay inuu dhaliyo goolkiisii ​​64-aad intii uu ku guda jiray waayihiisii ​​xulka qaranka ee Seleção, wuxuuna dhaafay Luís Nazário Ronaldo oo dhaliyay 62 gool.
Goolka 64-aad ee Neymar Jr ayaa yimid kulan ay kula ciyaareen xulka Peru isreeb-reebka Koonfurta Ameerika ee Koobka Adduunka 2022, kaddib markii uu ku guulystay inuu gool u badelo rigoore loo dhigay daqiiqadii 28-aad.
Halyeeyga reer Brazil ee Pele ayaa wali ah gooldhaliyaha ugu sareeya ee xulka qaranka Brazil kaddib markii uu dhaliyay 77 gool.
Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday fariinta xamaasada laheyd uu Luís Nazário de Lima Ronaldo u diray Neymar Jr, wuxuuna yiri:
“Waxaad heleysaa xushmad buuxda oo dhankeyga ah Neymar, wax badan ayaad ciyaareysaa, waxaad bixisaa baasas cajiib ah”.
“Alla maxay tahay qiso cajiib ah oo aad qoreyso, ciyaaryahan dhameystiran oo qaan gaar ah”.
“Waan ogahay sida ay u weyn tahay inaad xirato maaliyada jaalaha ah, iyo la macaamilka cadaadiska garoonka banaankiisa ah, way adag tahay inaad kubadda cagta ku qaadatid labadaada lugood mararka qaarkood”.
“Waxaad heysataa rikoorro badan si aad u jabiso, iyo calaamado badan oo aad ka tagi karto, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan arko Brazilian heer sare ah”.